स्थानिय सरकार कसैको आदेश र हुकुमबाट चल्दैन: निमफुन्जो शेर्पा प्रमुख, बाह्रबिसे नगरपालिका - Pahilo News
एकिकृत सेवाको पहुँच नपुगेका गाँउका जनतालाइ सेवा दिएर चर्चामा आएका बाह्रबिसे नगरपालीकाका प्रमुख निमफुन्जो शेर्पा सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेर थप चर्चामा छन । सिन्धुपाल्चोकका स्थानिय तहमा निकै सकृयताकासाथ काम गर्ने शेर्पाले किन गरे त सडकै पत्रकार सम्मेलन ? यीनै बिषयको सेरोफेरोमा रहेर उनिसग पत्रकार नेत्र पौडेलले गरेको कुराकानीको संपादित अंश ।
-गाँउगाँउमा एकिकृत सेवा अभियान र सडकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निक्कै चर्चामा हुनुहुन्छ । यो कस्तो अभियान हो ?
मेरो प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको जनताको सेवा नै हो । जनप्रतिनिध भए पछि धेरै जनताको घर आँगनमा पुगेको छु । यसरी जनतासँग नजिक हुदा के थाहा भयो भने हामी जनाताको सेवा भन्दा राजनितिका कुरा बढि गर्दारहेछौ । त्यसैले जनतालाइ एकै स्थानमा सबै प्रकारका सेवाहरु दिने अभियान नै बनाउने कार्यपालीकामा सहमति भयो । हामी यसको सुरुवाती चरणमा छौं । वडा नं ७ को घुमथाङ, र वडा नं १ घोर्थली को ठेनसामा सकियो । अन्य वडाहरुमा गर्दै जाने योजनामा छौं । म कम्युनिष्ट दिशानिर्देशबाट आएको मान्छे । चुनाबमा जनताका बीचमा मत माग्दा घरआँगनमै जनताका समस्या समाधान गर्ने र जनहितकारी , लोककल्याणकारी काम गर्ने बाचा गरेको थिए । अहिले त्यहि बाचा पुरा गर्ने अभियानको रुपमा पनि मैले यसलाइ लिएको छु । ती मध्यको एउटा काम यो एकिकृत सेवाको घुम्ति अभियान हो ।
-नगरपालिकाको अभियानलाई जनताले कसरी लिएको पाउनु भयो ?
मैले सोचेभन्दा निकै राम्रो प्रतिकृया पाएको छु । बिगतका शिबिरहरु कुनै एक बिषयका मात्र हुन्थे । तर, यसमा औषधि सहित स्वास्थ्य तथा भेटेनरी, बिभिन्न सिफारीस, सामाजिक सुरक्षकालागी परीचय पत्र निर्माण र न्यायिक समितिका सेवाहरुको समेत उपलब्ध गराएका छौ । आफनै आँगनमा सेवापाउदा जनता सन्तुष्ट छैन् । नगरवासीहरु धेरै खुसि पाएको छु । यस्ता अभियानको निरन्तरताको माग ब्यापक भएकाले आगामि बर्षमा थप व्यवस्थीत र परीणाम मुखि बनाउने छौं । यो शिबिरमा आउने एक जनाले एक दर्जन सुबिधा पाउछन् । लेकाली भेगका चौरी तथा भेडा किसानहरुलाइ सामान्य औषधिकालागी पनि चार दिन खर्च गरेर सेवा केन्द्र पुग्नु पथ्र्यो । हामीले लगेको शिविरमा बस्तुभाउलाइ औषधि, आफनो स्वास्थ्य परिक्षण, जेष्ठ नागरीक परीचय पत्र निर्माण, छोराछारीको नागरीकता निर्माण तथा सिफारीस र जन्म दर्तासम्म एकै दिन गर्नेहरु थिए । व्य वसाय दर्ता देखि तिरोभरो बुजाउनेसम्मका कामहरु एकैस्थानबाट हुदा नगरवासी पक्कै खुसि हुनुहुन्छ ।
-नगरपालिकाको आगामी योजना कस्ता छन् ?
हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछिका राम्रा काम सुचि तयार गर्दे हो भने निक्कै लामो भइसकेछ । मैले त धेरै ख्याल गरेको थिइन । अचेल यसो चोक सडकमा नगरवासीहरु राम्रा र सुधारात्क कामहरुको चर्चा गर्नुहँुदो रहेछ । बाह्रबिसे बजारलाइ धुलो मूक्त पार्ने, दुर्गन्धित नालाहरु सफा गर्ने, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नेकामको सुरुवात देखि नालिमाथी बनेका टहराहरु हटाउने, जनताको स्वास्थ्य सेवालाइ मुख्य प्राथमिकता दिने, शिक्षाको बिकासमा बिज्ञ तथा बिषयगत जानकारहरुको सुझाव अनुसार काम गर्ने, युवाहरुलाइ आय आर्जनमा लाग्न पे्ररीत गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, किसानहरुलाइ बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याएको छौ । समृद्धिको अभियानमा सबै नगरवासिहरुलाइ उत्साहि ढंगले लाग्ने वातावरण तयार बनाउने काम नै महत्वपुर्ण हो ।
-राम्रो कामको प्रचार त आफै भइहाल्छ नी, सडकमै पत्रकार सम्मेलन किन गर्नुपर्यो र ?
सडकमा पत्रकार सम्मेलन जनताका पक्षमा काम नभएर, नगरपालीकाको नितिकार्यक्रममा त्रुटि कमजोरी भएर वा जनप्रतिनिधिहरु बीचमा समस्या भएर गर्नु परेको होइन । राजनीतिक प्रतिशोधले जनप्रतिनिधिहरुको अवमुल्यन गरीए पछि बध्यताबस गर्नुपरेको हो । जनतालाइ साक्षी राखेर हामीले हाम्रो कुरा बताउन यसो गरेका हौ । अहिले मेरो नेतृत्वमा अल्पमत र बहुसंख्यामा फरक राजनीतिक आस्थाका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । यसका बाबजुत पनि हाम्रा बीचमा कुनै पनि किसिमको मतभेद, बादबिबाद वा टकराव छैन र हुँदैन । सहमतिमै नितिकार्यक्रम ल्याइयो, सहमति मै बजेट बनाइयो , आवस्यक ऐन कानुनहरु सहमति मै बनाइयो र बनाइदै पनि छ । नगर कार्यकापालीका र सभा सदस्यमा कुनै बैरभाव छैन । तर, कहिलेकाहि फरक अवस्था पनि देखिदोरहेछ जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको निकै ठुलो अवमुल्यन र अपमान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सत्य जानकारी गराउन जनताको माझ नै जानुपर्छ । त्यसैले हामीले सडकमै जनताको माझमा पत्रकार सम्मेलन गर्यौं ।
-सडकै पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नु भयो, अलि खुलस्त बताइदिनुहोस् न ?
हामीले सम्सोधित नगर सभा डाक्यौं । त्यसको लागि एक हप्ता अघि नै सबै सभा सदस्यहरुलाइ पत्रचार, टेलिफोन , एसएमएसलगाएतका सबै माध्यम मार्फत सभाका बिषय पनि खुलाएर पठाइएको थियो । तोकिएको दिन सभासदस्यहरु सबै कार्यालयमा आइसक्नु भएको थियो । केहि आउने क्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, सभा सुरु गर्ने बेला भएपछि एकाएक सदस्यहरु बाहिरिनु भयो । हामी कतै गएर आउनु होला भन्नेमा थियौं । पछि वहाहरुले सभा बहिस्कार गरेको भन्ने सुन्नमा आयो । उहाँहरुलाइ बजारको एक घरमा लगेर दिन भर थुनुवा बनाइ, बन्दकको शैलिमा तथानाम गाली गलोज सहित हप्कि दप्कि गरेर आइन्दा मेरो पुर्जि बेगर नगरपालीकामा गए राम्रो हुदैन भनेर पुर्व मन्त्रि भैसकेका नेताले भन्नु भएछ । यस अघि नेताका भाइले पनि कार्यपालीका बैठकमा पुगेका जनप्रतिनिधिलाइ बोलाएर यसै गर्नु भएछ । यो कुरा हामीले भन्दा पहिले जनताले थाहापाउनु भएछ । नगरपालीका ुनै पार्टिका दाजुभाइको रैति खेलाए जस्तो गरी जनप्रतिनिधिलाइ रबरछाप बनाउने अखडा बनाएको आरोप आएपछि सत्यतथ्य के हो जनतालाइ यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको हो ।
-सभा बहिस्कार गरेको भनिएको पक्षले त हामीले बहिस्कार गरेको हैन केहि प्रस्तावहरुमाथी छलफल गर्न नभ्याएर त्यो दिन निस्केको बताउछन् । अनि केहि नितिनियम संसोधनकालागी ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौ भन्छन् नी ?
यी सबै लाज लाग् ने किसिमका तर्क हुन् । यसमा कुनै सत्यत छैन । संसोधन गर्ने प्रस्ताव बनाएर सभा वा कार्यपालीका बैठकमा समय लिने सामान्य प्रकृया नै हो । यस्तै बिषयमा सजिलो होस भन्नकै लागी हामीले सात दिन अघि नै बिषय बस्तु सहित उल्लेख गरेर पत्रचार नै गरेका थियौं । पार्टिका आधिकारीक धारणाहरु बनाउन एक हप्ता पर्याप्त समय हो । यदि उहाहरुले भने जस्तो नभ्याएकै हो भने सहमतिमा सभा केहिदिन पर सारौं भन्न पनि सकिन्थ्यो । सभा त सबैको सहमतिमै तय गरीएको हो । बिषयबस्तुहरु पनि उहाहरुसँग छलफल गरेर नै तय गरीएको हो । यति हुदाहुदै पनि सभा छाडेर भाग्नु उहाहरुलाइ नै अप्ठेरो महसुस हुनु पर्ने बिषय हो । केहि वडा अध्यक्षहरुले त नजर बन्द तोडेरै बाहिरीनु भयो रे भन्ने पनि सुनियो ।
उहाँहरुको आन्तरीक मामिलामा मलाइ भित्र पस्नु जरुरी छैन । तर, स्थानिय सरकार कसैको आदेश र हुकुमबाट चल्दैन । सरकारका प्रतिनिधि भए पछि जनता प्रति जिम्मेवार हुने कि पार्टि नेता रिझाउन अपमान भएपनि सहने भन्ने निर्णय लिने सम्बन्धित साथीहरुको कुरा हो । मेरो कुरा के मात्रै हो भने जनप्रतिनिधिहरु पार्टिको बिचार र दर्शन बोकेर जनतामा जाने र निर्बाचित भए पछि सबैका साझा हितकालागी काम गर्ने प्रणालि लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो ।
खै मैले त केहि भन्न सक्ने कुरै भएन । बिभेद बिना सबै जन प्रतिनिधिज्यूहरु सँग सल्लाह गर्ने हो, बिश्वासका आधारमा काम गर्ने हो । सुरुदेखिकै अभ्यास पनि यहि हो । हाम्रा नगरकार्यपालीका तथा सभा सदस्यहरुले गरेको कुरामा मलाइ त बिश्वास छ । तर, उहाँहरुकै नेताले उहाँहरुलाइ अविश्वास गरेपछि मैले गर्ने केहि करै भएन ।
म कुनै दम्भ, घमण्ड, व्यक्तित्व देखाउन वा कुनै प्रतिसोधको बदला लिन राजनीति वा समाज सेवामा लागेको मान्छे हैन । नगरबाट सम्पादन गर्ने कुनै पनि काममा अहिले कुनै वाधा व्यवधान छैन । प्रसासनिक काम सुचारु छ । कतिपय जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले बसेर यसलाइ निचोडमा पुर्याउँ र सहमति सहकार्य र एकताको सन्देश दिउँ , जनतालाइ निराश नबनाउँ भन्नु भएको छ । अव कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा त उहाँहरुको निष्कर्षमा भर पर्ने कुरा छ । नगरका संबैधानिक जन प्रतिनिधि हामी जनताका अबिभावक हौं । जनप्रतिनिधि हौ हामी बीचमा समस्या छैन । उहाँका नेताहरु उनिहरुलाइ हामीले नगरमा पठाएका हौं नगर उनिहरुको भुमिकाले हैन हाम्रो आदेशले चल्नु पर्छ भन्नु हुन्छ । म पनि सोचि रहेछु, सोधि रहेछु अव के हुन्छ ।
० डा. गोविन्द केसीको लगातारको अनशनका बाबजुद प्रतिनिधिसभाले चिकित्साशास्त्र शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ..